သံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Iron Accessories Factory, Suppliers
Power Fitting-Pole တီးဝိုင်း
Power fittings များသည် ဓာတ်အား ပေးပို့မှုကို သိရှိနိုင်စေရန် ဓာတ်အား ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားအားလုံး ဖြစ်သည်။ ပါဝါတပ်ဆင်ခြင်းအား ပါဝါလိုင်းအပိုပစ္စည်းများ၊ ပါဝါတိုင် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဓာတ်အားလိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းများ၊ Power Fittings များတွင် အောက်ပါအတိုင်း ပါ၀င်သည် ။
• မြင့်မားသော breaking load ခွန်အား
• အပူ- dipgalvanized
• အရည်အသွေးအပေါ် အမြဲတမ်း
ပစ္စည်း : Q255B
Glass insulators များ
Insulator များသည် မတူညီသော အလားအလာရှိသော conductor များအကြား သို့မဟုတ် conductor များနှင့် ground ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကိရိယာများဖြစ်ပြီး ဗို့အားနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် overhead ဂီယာလိုင်းများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည့် အထူးလျှပ်ကာထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ကြေးနန်းတိုင်များ အတွက် insulator များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဖြည်းညှင်းစွာ၊ ဗို့အားမြင့်ဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှုမျှော်စင်၏ အဆုံးတစ်ဖက်တွင် ဒစ်ပုံသဏ္ဌာန်အကာအရံများစွာကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ၎င်းကို creepage အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို များသောအားဖြင့် ဖန် သို့မဟုတ် ကြွေထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး insulator ဟုခေါ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လျှပ်စစ်ဝန်အခြေအနေများ အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများကြောင့် လျှပ်ကာများသည် ပျက်ကွက်ခြင်း မဖြစ်သင့်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက insulators များသည် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင် လိုင်းတစ်ခုလုံး၏ အသုံးပြုမှုနှင့် လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။
1. 33kv pin post composite insulator ၏ အရွယ်အစားနှင့် နည်းပညာဒေတာ အမျိုးအစား: FP-33/8 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(KV) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုဝန်(KN) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အမြင့်(mm) H Insulating distance(mm) h Min nominal creepage distance(mm) 1min power frequency wet withstand voltage (kv) Full wave lightning impulse withstand voltage(peak value) 33 8 417 338 1160 90 200 2.Materials of 33kv pin post composite insulator 1. Sheds/house for Silicon Rubber. 2)ဖန်-ဖိုက်ဘာအားဖြည့် epo...
Strain Clamps များ
Tension Clamp (တင်းမာမှုကုပ်၊ တင်းကုပ်ကုပ်၊ dead-end clamp) သည် ဝါယာကြိုး၏တင်းမာမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဝါယာအား တင်းမာသောကြိုး သို့မဟုတ် တာဝါသို့ဆွဲထားရန် ဝါယာကြိုးကို ပြုပြင်ရန် အသုံးပြုသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရည်ညွှန်းသည်။ Strain Clamp များကို ထောင့်များ၊ splices များနှင့် terminal ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ခရုပတ်အလူမီနီယမ်ကို ဖုံးအုပ်ထားသော စတီးဝါယာကြိုးများသည် အလွန်ပြင်းထန်သော ဆန့်နိုင်အား၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲ၊ အလင်းပြန်ကြိုးကို ကာကွယ်ပေးပြီး တုန်ခါမှုကို လျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးသည်။ optical cable tensile hardware အစုံအလင်တွင်- tensile pre-t...
Suspension Clamp ကို insulator string ပေါ်ရှိ ဝါယာကြိုးအား ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်ဝါယာကြိုးကို ချိတ်ဆွဲရန် အသုံးပြုသည်။
ဖြောင့်တန်းသောဝင်ရိုးများတွင်၎င်းကို transposition conductors များနှင့် transposition poles များပေါ်ရှိ tensile rotation တို့ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထောင့်မျှော်စင်၏ jumper ကိုပြုပြင်ခြင်း။
ကုပ်နှင့်ထိန်းကိရိယာများသည် ပျော့ပြောင်းနိုင်သောသံ၊ ချည်ထိုးတံများသည် သံမဏိ၊ အခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် သံမဏိဖြစ်သည်။ သံဓာတ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် ပူပြင်းသော သွပ်ရည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ချိတ်ဆက်မှု ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ကြိုးများအဖြစ် ဆိုင်းထိန်းလျှပ်ကာများ စုစည်းရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ကြိုးတန်းလျှပ်ကာများကို တိုင်မျှော်စင်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ချိတ်ဆက်ကာ ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ Suspension Clamp နှင့် Strain Clamp နှင့် insulation ကြိုးတန်းခွဲများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကေဘယ်ကြိုးများ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် တိုင်များ တာဝါတိုင်များ ချိတ်ဆက်မှု ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ XYTower ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ U-shaped တွဲလောင်းလက်စွပ် ထုတ်လုပ်သူ လက်ကားချိတ်ဆက်ခြင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးဆွဲအစိတ်အပိုင်းများဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဒီလိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို...